New Normal ကာလလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို မည်သို့ကိုင်တွယ်အသုံးချနိုင်မည်နည်း? - Vanguard
Home » New Normal ကာလလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို မည်သို့ကိုင်တွယ်အသုံးချနိုင်မည်နည်း?
Posted by Vanguard on December 2, 2020 .
မကြုံစဖူး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသောအခါ လူသားအရင်းအမြစ်များ (HR) သည် အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပြီး နေအိမ်မှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ခွင့်ရက်ရှည်ယူခြင်း၊ အလုပ်ခေတ္တရပ်နားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်မဲ့ခြင်း၊ မကြာခဏထုတ်ပြန်သော အစိုးရအမိန့်များနှင့် စီးပွားရေးကျဆင်းခြင်းစသည့် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထို့အပြင် HR အနေဖြင့်၂၀၂၁ ခုနှစ်နှင့် နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ဘတ်ဂျက်နှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများ အလွန်ကွာခြားသွားမည်ကိုလည်း ကြိုတင်တွက်ဆ ပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအကျပ်အတည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပုံကို ပြောင်းလဲလိုက်သည်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ကို စနစ်တကျဖြစ်စေရန် စီစဉ်ပေးသည့် နည်းကိရိယာများကို ဖန်တီးရန် လိုအပ်ချက်သစ်များကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မကြာသေးမီက AKT Global ရှိ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အကြံပေးလုပ်ငန်း၏ စီမံခန့်ခွဲရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်သူ Etan Bernstein နှင့် ဤအကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Bernstein က ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းများ၏ HR ၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စနစ်များကို ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ HR လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြန်လည်ပုံဖော်ပေးခြင်း၊ ပြောင်းလဲမှုစီမံခန့်ခွဲရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ဝယ်ယူသူများအား ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးရန် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်။
မေး – HR အဖွဲ့အစည်းများသည် ဝန်ထမ်းများ၏ “ပုံမှန်ဘဝသစ်” အတွေ့အကြုံကို မည်သို့ကိုင်တွယ်အသုံးချနိုင်မည်နည်း။
ဖြေ – ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါမတိုင်မီက ကိန်းဂဏန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝန်ထမ်းထက်ဝက်ခန့်နီးပါးသည် ဤကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအတွင်း အနည်းဆုံး ကာလအချို့ နေအိမ်မှ လုပ်ကိုင်ကြရပြီး ကပ်ရောဂါပြီးကာလတွင်လည်း ဆက်လက်၍ နေအိမ်မှ လုပ်ကိုင်သွားရမည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ HR အနေဖြင့် အရေးပါသော ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းမှ အစပြု၍ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် ဦးစီးဆောင်ရွက်မှုကို လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောင်းလဲခြင်းအထိစသည့် အရေးပါသော လုပ်ငန်းအချို့အပါအဝင် အခြားကိစ္စများစွာကို အရေးတယူဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စရပ်တွင် အခရာအကျဆုံးမှာ ဝန်ထမ်းများ၏ အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ နေအိမ်မှ လုပ်ကိုင်ခြင်း ကာလတွင် ဝန်ထမ်းများအတွက် အတွေ့အကြုံသစ်များကို ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အလုပ်ရွေးချယ်မှုများ ပေးထားခြင်းနှင့် နေအိမ်မှ လုပ်ကိုင်သူများ သို့မဟုတ် ရောနှောလုပ်ကိုင်သူများအတွက် အတွေ့အ‌ကြုံကို မြှင့်တင်ပေးရန် စဉ်းစားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရမည်။
သို့သော် ဤအရာမှာ HR အတွက် အခြေအနေသစ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။
ကိုဗစ်-၁၉ သည် လူတိုင်းအတွက် အသစ်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့် HR အတွက် အသစ်မဟုတ်သနည်း။
ဤကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှုသည် HR အတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ၊ ဝန်ထမ်းကို ပို၍ဗဟိုပြုသော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းရန် လိုအပ်ချက်သည် အ‌ရေးကြီးအခြေအနေသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က ဤအရာကို လက်ခံ၍ လည်ပတ်နေသည့် အောင်မြင်သော အဖွဲ့အစည်းများကို မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များအား လိုက်လျောညီထွေကျင့်သုံးကြရန် တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အလုပ်ခွင်၌ အရာရာကို လွယ်ကူစေရန်၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်စေရန်နှင့် ရိုးရှင်းစေရန် ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ အထူးသဖြင့် ထောင်စုနှစ်ပြည့်ကာလမျိုးဆက်များ (millennials) နှင့် နောက်ပိုင်း iGeneration မျိုးဆက်များ များပြားလာသော အချိုးအစားကြောင့် ထိုသို့ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Amazon၊ Netflix၊ Apple သို့မဟုတ် အခြားအွန်လိုင်းလက်လီရောင်းချသည့် ဆိုက်များသို့ဝင်ရောက်ပြီး အသုံးပြုရသည်မှာ မည်မျှလွယ်ကူသည်ကို ကြည့်ပါ၊ သင်ရှာဖွေနေသည်ကို တွေ့ရှိရန်နှင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်မှာ အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုက်ကြီးများသည် သင်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် ဝယ်ယူမှုပုံစံကို အခြေခံ၍ အကြောင်းအရာများ ဖော်ပြခြင်း၊ ဆက်စပ်ကုန်ပစ္စည်းများကို အကြံပြုဖော်ပြခြင်း၊ ကုန်ပို့ခများ လျှော့ချပေးခြင်းနှင့် နှစ်သက်ရာ ကုန်ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခြင်းတို့အထိ ပြုလုပ်နိုင်ကြသည်။ သူတို့၏ အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံများနှင့် ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှုဌာနများသည်လည်း အခက်အခဲမရှိ ချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်လေ့ရှိသည်။ ယခု ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအတွင်းတွင်ပင် အဆိုပါ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီကြီးများသည် အောင်မြင်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ Amazon ၏ တတိယသုံးလပတ်ဝင်ငွေတွင် အကျိုးအမြတ်မှာ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်နေသည်။
ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ်များ၏ (Cusotmer Services Representatives) ခေါ်ဆိုပြီးမြောက်မှုနှုန်းနှင့် ရောင်းချမှုပမာဏများထက် ဝယ်ယူသူစိတ်ကျေနပ်မှုပေါ် မူတည်၍ အကဲဖြတ်သည်။ ၎င်းကို “လွယ်ကူချောမွေ့စေသော ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှု” ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
ရိုးရှင်းစွာဖော်ပြရလျှင် “လွယ်ကူချောမွေ့စေသော ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှု” ဆိုသည်မှာ ဝယ်သူသူနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းကို ဦးစားပေးခြင်းထက် ဝယ်ယူသူ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် လွယ်ကူသော ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှုကို ဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပတွင် ကြုံရလေ့ရှိသည့် အဆိုပါ လွယ်ကူချောမွေ့သော အတွေ့အကြုံများသည် သူတို့၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ပြန်လည်တွေးခေါ်သတ်မှတ်စေသည်။ သင်၏ ဝန်ထမ်းများသည် HRနှင့်ပက်သက်၍ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးကို မျှော်လင့်ထားသည်။
သို့ပါ၍ ယနေ့ခေတ် HR ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၏ “ထိရောက်မှု” ကို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ရာတွင် ယခင်နှင့် မတူတော့ပေ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်သည် HR အဖွဲ့အစည်းများအား သက်ဆိုင်ရာ လွယ်ကူချောမွေ့သော ဝယ်ယူသူအတွေ့အကြုံများကို ကြံဆရှာဖွေစေပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် ဝန်ထမ်းများနှင့် မန်နေဂျာများအတွက် “ကောင်းမွန်မှု” ဆိုသည်မှာ မည်သို့သော အခြေအနေအား ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုသည်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်စေသည်။
အဖွဲ့အစည်းများသည် ဤလွယ်ကူချောမွေ့သော ဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံကို မည်သို့အောင်မြင်အောင် ပေးစွမ်းမည်နည်း။
HR အနေဖြင့် New Normal ခေတ်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် HR ကို စီမံခန့်ခွဲရန် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊ မည်သည့် device ဖြင့်မဆို အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းအားလုံးအား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် အသွင်ပြောင်းလဲပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ AKT တွင် ဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံကို ရိုးရှင်းစေခြင်း၊ မနှောင့်နှေးစေခြင်းနှင့် လွယ်ကူစွာနားလည်စေခြင်းတို့သည် အလွန်အရေးပါသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့က လက်ခံယုံကြည်ထားပါသည်။
ဤအချက်မှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ မတိုင်မီ၊ ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းနှင့် နှောင်းပိုင်းကာလများတွင် အရေးပါသော ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းချင်း ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သည့် မိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းမှုများ နှင့် အရေးပါသော အခြေအနေများတွင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းစွာပေးနိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းကိရိယာများဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး ဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံကို ဘက်စုံခြုံငုံရှုမြင်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်သာမက ပို၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆန်သော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် လမ်းကြောင်းဖောက်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Reference : https://news.sap.com/2020/11/pandemic-long-term-hr-implications-etan-bernstein-akt-interview/